डिसेम्बर मा श्रीलंका, छुट्टी र मौसम
पौराणिक सिलोन (यो प्रयोग गरिन्छ हालको श्रीलंका भूमि भनिन्छ गर्न), दक्षिण एशिया मा छ। यो बङ्गाल को खाडी मा स्थित एक धेरै ठूलो द्वीप, भारतीय महासागर को पानी द्वारा धोए छैन। इलाकाहरू को क्षेत्र जो श्रीलंका देश को समुद्री सरसम्पत्ति सहित 65 वर्ग किलोमिटर, अलि छ। यो द्वीप राष्ट्र को आकार द्वारा तस्मानिया र आयरल्याण्ड गर्न व्यावहारिक बराबर छ।
डिसेम्बर - श्रीलंका मा एक छुट्टी लागि सही समय: वर्षाको सिजन माथि छ, र सौर र सुक्खा मौसम स्थापना गर्नुहोस्। यहाँ आफ्नो रहन रोचक र धनी हुनेछ, र तपाईं को लागि एक राम्रो बोनस वर्ष बाँकी भन्दा अलिकति कम छन् जो टिकट, को मूल्य हुनेछ। डिसेम्बर मा श्रीलंका गर्न पर्यटन, हरेक वर्ष थप लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। र हामी अब बुझ्न प्रयास गर्नेछ जो कारण, एक नम्बर छन्।
डिसेम्बर मा श्रीलंका, मौसम
गत महिनामा, श्रीलंका शरद ऋतु मनसुन पछि जीवन आउँछ, र तापमान बिस्तारै वृद्धि भएको छ। मौसम श्रीलंका डिसेम्बर मा, सहज बस्ने। यो महिनाको सुरुमा, यहाँ विश्राम र सान्त्वना र साहसिक को खोज मा पृथ्वी बगालको यहाँ विभिन्न कुनामा देखि पर्यटक समुद्र तट र पौडी मौसम, र हजारौं आउँछ।
नियम, यो समयमा पर्यटकहरु यहाँ पर्यटक पूर्वाधार राम्रो छ, किनभने द्वीप को दक्षिण-पश्चिम तट चयन गर्नुहोस्। साथै, डिसेम्बर को शुरुवात देखि र अप्रिल को अन्त सम्म, उत्तर-पश्चिम मा मनसुन को दिशा परिवर्तन। यस सन्दर्भमा, यी क्षेत्रमा बङ्गाल को खाडी बाट आउने आर्द्र हावा को लहर कवर।
तथापि, पहाड दायरा, केन्द्र मा स्थित छ जो, दुई भागमा द्वीप विभाजन र हावा प्रवाह, तिनीहरूलाई द्वीप को पश्चिम र दक्षिण भित्र पस्नु गर्न अनुमति छैन रोक्छ। वर्षा को राशि monsoons कम आक्रामक हुँदै गइरहेका छन्, जोडले कम छ।
दिउँसो हावा तापमान +30 ° C गर्न rises, र राती यसलाई सहज हुन +24 ° सी खस्छ यस्ता Weligama, गाले, Hikkaduwa Wadduwa Bentota रूपमा छुट्टी रिसोर्ट्स लागि रोज्न भने मात्र होइन वर्षा देखि तर पनि न्यानो र एक दिन अप सात घण्टा चमक छ जो सूर्य, सुरक्षा भनेर एक छाता लिन, र हावा +30 ° सी सम्म खुसीले गदगद छ
जहाँ आराम गर्न?
द्वीप अपेक्षाकृत सानो छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद पर्यटकहरु यहाँ ठाउँहरू प्रशस्त पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ डिसेम्बर मा श्रीलंका मा एक ब्रेक। यहाँ रिसोर्ट्स फरक तटों, लोकप्रिय पूर्वाधार हो। कसैले देश को स्थलहरुको यात्रा धाउन सक्नुहुन्छ हुनत, डिसेम्बर, ज्यादातर समुद्र तट मा श्रीलंका मा बिदाहरू। यस लेखमा हामी केही लोकप्रिय रिसोर्ट्स तपाईं परिचय हुनेछ।
यो एउटा सानो सुरम्य शहर छ र एक लोकप्रिय, तेजी विकास रिसोर्ट, द्वीप को पश्चिम मा स्थित छ जो, देश को पुरानो राजधानी दक्षिण एक सय किलोमिटर - कोलम्बो।
Hikkaduwa मा बीच राम्रो कायम, 10 किलोमिटर लम्बाइ। उहाँले राम्रो व्यापक छ, र मात्र केही क्षेत्रमा tapers। समुद्र तट रेखा माथि दायाँ किनारमा मा अवस्थित छ कि होटल को एक नम्बर द्वारा, नजिक पानी हरेक वर्ष थप र थप निर्माण गरिएको छ।
Hikkaduwa र नाइटलाइफ त्यहाँ। हरेक शुक्रवार कम्पन होटल एक "प्रत्यक्ष" संगीत संग धेरै हल्ला रात डिस्को भइरहेको छ। यो रिसोर्ट शहर बाँकी दिन प्रारम्भिक सुत्न जान्छ, र साँझ मनोरञ्जन प्रेमीहरूलाई तिनीहरूलाई मात्र समुद्र तट मा बारहरू मा पाउन सक्नुहुन्छ।
डिसेम्बर मा श्रीलंका - यो समय पर्यटन छुट्टी लिन मौका छ। यो रिसोर्ट आकर्षण क्षेत्रमा त्यहाँ सानो छ, तर तत्काल वरपर तिनीहरूलाई धेरै। पर्यटकहरूले कछुवा खेत, को बारुद, रत्न mined जुन गर्न यात्रा प्रेम। तिनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज, नजिकैको स्थित, साथै मन्दिर पराउँछु।
द्वीप को दक्षिण-पश्चिम मा यो रिसोर्ट शहर समुद्र तट प्रेमीहरूको लोकप्रिय छ। शहर सानो छ - यो पर्यटन व्यवसाय मा कार्यरत छन् जसलाई अधिकांश 37 हजार मान्छे, को कुल द्वारा Inhabited छ।
डिसेम्बर मा श्रीलंका, हाम्रो पात्रो जाडो को शुरुवात देश को तातो घाम-भिजेको तटों मा हुन अनुमति दिन्छ। खैर, Bentota मा समुद्र तट धेरै राम्रो, विशेष गरी शहर बाहिर क्षेत्रमा छन् - Induruwa, Kosgoda छिमेकी क्षेत्रमा।
केही तटों सुरक्षित खाडी बतास देखि बन्द छन्, त्यसैले ठूलो छालहरू दुर्लभ छन्। यो रिसोर्ट श्रीलंका को पश्चिम र दक्षिण मा अन्य भन्दा कम भीड छ।
डिसेम्बर मा श्रीलंका, भव्य। साँच्चै यसको सौन्दर्य कदर गर्न, Beruwela जाने - कोलम्बो 55 किलोमिटर दक्षिण र Bentota5किलोमिटर उत्तर पश्चिम तट मा स्थित एक सुन्दर रिसोर्ट शहर।
दक्षिण-पश्चिम तट संग रिसोर्टमा फैलिएको। उहाँले अझै पनि धेरै युवा हो, त्यसैले यसको पूर्वाधार बस विकास गरिएको छ। यो भव्य सेतो बलौटे सागर, क्रिस्टल स्पष्ट पानी र कोमल सूर्य को तट साथ सुत्छन् भन्ने तटों - के तपाईं एक समुद्र तट छुट्टी र सुन्दर तन लागि आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ।
समुद्र तटों साथ विभिन्न सुविधा स्तर को होटल छन्। Beruwela को समुद्र तट मा समुद्र गाला उठेको छ अक्सर छ, र एक धेरै ठूलो छालहरू उठाएको, तर यो समयमा तपाईं creeks र खण्ड मा पौडी खेल्न सक्छ। यहाँ सबै परम्परागत समुद्र तट को कोरल reefs पानी स्किइङ, विन्डसर्फिङ, जलयात्रा परिभ्रमण, जलयात्रा, स्नोर्कलिङ सहित गतिविधिहरु छन्। यहाँ नरमाइलो गरिनेछ, र पानी माछा मार्ने को प्रशंसक।
Beruwela को क्षेत्र मा जलमग्न जहाज को कब्रिस्तान छ। यो Divers लागि स्वर्गीय स्थान हो। यहाँ डाइभिङ र पानी खेल Confifi मेरिना को प्रसिद्ध केन्द्रहरू छन्। यो रिसोर्ट शायद जवान कम्पनीहरु लागि उपयुक्त, नाइटलाइफ Beruvella रूपमा जवान मान्छे को लागि कुनै मनोरञ्जन पनि हो।
श्रीलंका डिसेम्बरमा - एक लोकप्रिय मार्ग। तर द्वीप मात्र होइन भीड र व्यस्त रिसोर्ट्स छ। उदाहरणका लागि, Unawatuna - एउटा सानो तटीय शहर, अझ, एक गाउँ द्वीप को दक्षिण मा स्थित। यो एक ठूलो शहर र भ्रमण नजिक छ - हाले, र यसको छेउछाउको छ।
हालसालै, यो एक सानो माछा मार्ने गाउँमा थियो, तर अब पर्यटकहरु सधैं स्थानीय बढी छन्। सर्वाधिक लोकप्रिय यो रिसोर्ट शायद मात्र Bentota र Hikkaduwa कमसल छ।
र तपाईं एक पर्यटन छुट्टी रुचि भने तपाईँले राम्रो एक प्रमुख बंदरगाह शहर मा श्रीलंका को दक्षिण मा, जाने दक्षिणी प्रान्त को राजधानी - हाले। यो कोलम्बो हवाई अड्डा देखि 145 किलोमिटर स्थित छ। हाले - भ्रमण ठाउँ, र एक समुद्र तट रिसोर्ट। शहर तट मा स्थित छ, र यो पनि यसको आफ्नै सुन्दर समुद्र तट शहर छ।
दक्षिण मा एक सानो रिसोर्ट गाउँ, Matara को जिल्ला स्वामित्वको, एक बलौटे Cove को तट मा स्थित। त्यहाँ 75 हजार मान्छे को स्थायी बासिन्दा हुन्। यो रिसोर्ट Surfers रोजेका थिए। सुनको बलौटे समुद्री तट को तट को मुख्य भाग। यो रिसोर्ट को फाइदा पर्यटक सानो नम्बर हो।
डिसेम्बर मा श्रीलंका, यात्री समीक्षा
एक परी कथा मा एक वास्तविक चमत्कार, गोता - डिसेम्बर पहिले नै भ्रमण गर्ने श्रीलंका, छुट्टी यो शानदार द्वीप सबैले अनुसार। राम्रो-groomed तटों, सुन्दर सेवा, हरेक स्वाद, यो टाढा तर धेरै सत्कार देश को ठाँउहरु हेर्न क्षमता अनुरूप राम्रो होटल - यो एक उत्तम छुट्टी लागि सबै कुरा छ।
जर्मनी मा अलम गिरजाघर
Uruguay आकर्षण: प्रकृति र वास्तुकला। uruguay शहर
Waterpark "Baryonyx": मूल्यहरु र समीक्षा। Waterpark कजान मा "Baryonyx"
को गुफाहरु Chater-बडी पिस्तौल Crimea मा गर्न यात्राहरु
कसरी Unturned सर्भर सिर्जना गर्ने विवरण
सूर्य मा जलाए भने, के गर्ने?
कसरी पहिलो प्रयास मा ट्राफिक प्रहरी शहर आत्मसमर्पण गर्न
द्वितीय विश्व युद्ध को जेट विमान, सिर्जना र आवेदन को इतिहास
आकर्षण मास्को: Reservoir Pirogovskoe
स्नान र साउना लागि पूल
सब नोट बुक HP EliteBook 2540P
परिभाषा, अर्थ र आवेदन: lestvichnaya सिस्टम के छ